Thursday .4June . 2020
ခင်ပွန်းကို လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ အမြွှာကလေးနှစ်ဦးကို ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ခဲ့တဲ့ မိခင်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ Kupang မှာနေထိုင်တဲ့ အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခင်ပွန်းက သူမကို မကြာခဏ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့ဆိုပြီး၊ လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ အမြွှာကလေးနှစ်ဦးကို ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ WorldOfBuzz သတင်းက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိလည်း သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ပေမယ့် အထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ သူမကို သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲအချုပ်နဲ့ ဆေးကုသမှု ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရားခံအမျိုးသမီးရဲ့အမည်ကတော့ Dewi Regina Ano လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ အသက်(၅)နှစ်အထိ ရောက်နေကြပြီလိွုှ့ သိရပါတယ်။ Dewi ဟာ ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကို ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ပြီးနောက် သူမရဲ့ဗိုက်ကို ဓားနဲ့ထိုးသွင်းခဲ့သလို၊ လည်ပင်းကိုလည်း ဓားနဲ့ လှီးခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ သွေးထွက်လွန် သတိလစ်သွားခဲ့ပေမယ့် မသေခဲ့ပါဘူး။
ကလေးတွေအမည်ကတော့ Angga Masus နဲ့ Angkri Masus တို့ဖြစ်ပြီး၊ စက်တင်ဘာ (၅)ရက်က အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ သေလုသေခင်ဖြစ်နေတဲ့ အလောင်းဘေးမှာ ကလေးနှစ်ယောက်စလုံး အသက်မဲ့သေဆုံးနေပါတယ်။ အစက သူတို့ကို လူသတ်သမားက သတ်ခဲ့တာလို့ ရဲက ထင်ခဲ့ပေမယ့်-
ဆေးရုံပေါ်မှာ ပြန်လည်အခြေအနေကောင်းလာတဲ့ Dewi က သူမ လုပ်ခဲ့တာလို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းက ပိုက်ဆံလည်း မအပ်တော့သလို၊ ပြန်လာတိုင်း သူမနဲ့ ကလေးတွေကို ရိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ လူ့ဘဝမှာ မနေချင်တော့လို့ ဒီလိုလုပ်တာလို့ ပြောပါတယ်။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ Kupang မှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ(၂၄)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ ခငျပှနျးက သူမကို မကွာခဏ ရိုကျနှကျနှိပျစကျလို့ဆိုပွီး၊ လကျစားခတြေဲ့အနနေဲ့ အမွှာကလေးနှဈဦးကို ဓားနဲ့ခုတျသတျခဲ့တယျလို့ WorldOfBuzz သတငျးက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအမြိုးသမီးဟာ မိမိကိုယျကိုယျမိမိလညျး သကွေောငျးကွံစညျခဲ့ပမေယျ့ အထမမွောကျခဲ့ပါဘူး။ သူမကို သကျဆိုငျရာရဲတပျဖှဲ့က ရဲအခြုပျနဲ့ ဆေးကုသမှု ခှငျ့ပွုထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ တရားခံအမြိုးသမီးရဲ့အမညျကတော့ Dewi Regina Ano လို့ သိရပါတယျ။
ကလေးနှဈယောကျကတော့ အသကျ(၅)နှဈအထိ ရောကျနကွေပွီလိှုှ့ သိရပါတယျ။ Dewi ဟာ ကလေးနှဈယောကျစလုံးကို ဓားနဲ့ခုတျသတျပွီးနောကျ သူမရဲ့ဗိုကျကို ဓားနဲ့ထိုးသှငျးခဲ့သလို၊ လညျပငျးကိုလညျး ဓားနဲ့ လှီးခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ သှေးထှကျလှနျ သတိလဈသှားခဲ့ပမေယျ့ မသခေဲ့ပါဘူး။
ကလေးတှအေမညျကတော့ Angga Masus နဲ့ Angkri Masus တို့ဖွဈပွီး၊ စကျတငျဘာ (၅)ရကျက အသတျခံခဲ့ရတာပါ။ မိခငျဖွဈသူရဲ့ သလေုသခေငျဖွဈနတေဲ့ အလောငျးဘေးမှာ ကလေးနှဈယောကျစလုံး အသကျမဲ့သဆေုံးနပေါတယျ။ အစက သူတို့ကို လူသတျသမားက သတျခဲ့တာလို့ ရဲက ထငျခဲ့ပမေယျ့-
ဆေးရုံပျေါမှာ ပွနျလညျအခွအေနကေောငျးလာတဲ့ Dewi က သူမ လုပျခဲ့တာလို့ ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။ ခငျပှနျးက ပိုကျဆံလညျး မအပျတော့သလို၊ ပွနျလာတိုငျး သူမနဲ့ ကလေးတှကေို ရိုကျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ လူ့ဘဝမှာ မနခေငျြတော့လို့ ဒီလိုလုပျတာလို့ ပွောပါတယျ။
ဆန်ဒပွမှုတှေ က တနိုငျငံလုံး ကို ကူးစကျ ပီး သမ်မတျ အိမျဖွူတျောကိုပါ SHUT DOWN ခထြားရတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ နောကျဆုံးရအခွအေနေ
လူမညျးအမြိုးသား ဂြော့ချြ ဖလှိုကျ သဆေုံးမှု နဲ့ ပတျ သတျပွီး အမရေိ ကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရနျ့နှ ငျ့ Facebook ပိုငျ ရှငျ မကျဇူကာဘတျ တို့ ငွိပွီ
မောငျနှမနှဈယောကျ TABLET လုရာမှ (၁၅)နှဈအဈကိုဖွဈသူက (၁၀)နှဈ ညီမလေးကို တူနဲ့ထုသတျ